မတ်လမှာ Apple က ၁၂ လက်မ MacBook ကို update လုပ်မယ်။ ငါက Mac ပါ
မတ်လတွင် Apple မှ ၁၂″ MacBook ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်
အသုံးချ | | Mac OS X ကို, NOTICIAS, ကောလာဟလများ
Cupertino ကုမ္ပဏီ၏သတင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရ Apple သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် Ultrabook ဖြစ်သော 12″ MacBook, အသစ်စက်စက်ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူလာလိမ့်မယ်။
မတ်လမှာ MacBook အသစ်တွေလား။
သင်သိသည့်အတိုင်းမတ်လသည်အက်ပဲလ်အားမီဒီယာသစ်တစ်ခုစီစဉ်ရန်စီစဉ်သည့်လဖြစ်သည်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောတူထားကြသူများထဲမှတစ်ခုမှာအသစ်ဖြစ်သည် iPhone 5se၄ လက်မအရွယ်စမတ်ဖုန်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုမစွန့်ဘဲ Apple ၏4နှင့် 6s အကွာအဝေးထက်အနည်းငယ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောဈေးနှုန်းချိုသာသောမော်ဒယ်ကိုစတင်ရန်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည်သေးငယ်သောစက်ကိရိယာနှင့်ချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ သူနှင့်အတူသူနှင့်လည်းကောလဟာလများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့2(Hermes နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ဖူးသောမိတ်ဖက်အသစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ရိုးရှင်းသောကြိုးအသစ်များနှင့်ရုတ်တရက်မျက်နှာသာပေးသောဟာသ) အိုင်ပက် Air လေကြောင်းလိုင်း3၎င်းတွင် 4GB RAM အထိထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အားလုံးသည်ကောလဟာလများဖြစ်သည်၊ ဤယူဆချက်ကိုဖော်ပြသည့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သော်လည်း DigiTimes သည်ယခုအချိန်တွင်မီးအကြောင်းလောင်စာဖြည့်သည်။ အသစ် 12″ MacBookရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရိုးရိုးလေး update လုပ်ခြင်း။
ဤအခါသမယတွင် Apple ၏နောက်ဆုံးလက်ပ်တော့အသစ်များကိုပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်စိတ်ကူးသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပါကကုမ္ပဏီသည်ဤပုံစံအသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မတ်လတွင်တိတိကျကျရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ လက်ရှိ MacBook Air အကွာအဝေးကိုဆက်ခံသည်။ ဒါပေမယ့်ကြာကြာမစောင့်သင့်ဘူး။ အဆိုပါဖျောပွအလတ်စား, အများ၏ update ကိုအရသိရသည် 12″ MacBook ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည် Intel Skylake ပရိုဆက်ဆာအသစ်များ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကြီးမားဆုံးအသစ်အဆန်းဖြစ်ကောင်းကဤအသစ်သောပရိုဆက်ဆာများ၏တိုးချဲ့၏အစဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အဆုံး၌ထုတ်လုပ်မှုသည် 13,3″ MacBook နှင့်တတိယသုံးလပတ်ကာလအတွင်း, နွေရာသီအလယ်၌တစ် ဦး ၏ထုတ်လုပ်မှု 15″ MacBook.
ဤအရာအားလုံးကိုအတည်ပြုပြီးပါကကြီးမားသောမေးခွန်းမှာမိသားစုဘာဖြစ်မည်နည်း MacBook Air ကို? ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနောက်ထပ်မျိုးသုဉ်းခြင်းထက်ပိုမိုသောကြောင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်လား
အရင်းအမြစ် ငါက Mac ကပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » မတ်လတွင် Apple မှ ၁၂″ MacBook ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်
Titan စီမံကိန်း၏အကြီးအကဲ၊ အထွေထွေ Safari ပျက်ကျမှု၊ MacBook ကောလာဟလအသစ်များနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး